Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Mu‘taz Numan ‘Cabd Nayif Najm al-Jaburi
Mu‘taz Numan ‘Cabd Nayif Najm al-Jaburi
Mu‘taz Numan ‘Abd Nayif Najm al-Jaburi, oo sidoo kale loo yaqaano Xaaji Taysiir, waa hoggaamiye sare oo ka tirsan Kooxda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Siiriya (ISIS) wuxuuna xubin ka yahay dhaxal sugaha kooxda ISIS ee al-Qaacida ee Ciraaq (AQI).
Al-Jaburi wuxuu ahaa qofka kor kala socday sameynta bambaanooyinka ee argagixisada ISIS iyo howlaha kacdoonka.
Taariikhdu makay ahayd bishii Juun 2014, ISIS, oo sidoo kale loo yaqaan ‘Daacish’, ayaa la wareegtay qaybo ka mid ah wadanka Suuriya iyo Ciraaq, oo waxay isku magacawday waxa loogu yeero “khilaafada” Islaamka, oo waxayna Al-Baghdadi ugu magacdareen inuu yahay “khalaafada.” Sanadihii la soo dhaafay, ISIS waxay ay daacadnimo ka heshay kooxaha jihaadiyiinta iyo shakhsiyaad xagjirka ah oo ka kala socda daafaha dunida, iyagoo dhiirrigelinaya weerar ka dhaca dunida.
Abaalmarintani waxay muhiim u tahay dagaalka aan kula jirno kooxda ISIS. Maaddaama kooxda ISIS looga adkaaday ama lagu jebiyay goobta dagaalka, waxaa na go’an in aan sheegno oo aan soo helno hoggaamiyeyaasha kooxda si isbahaysiga caalamka ee waddammada la dagaallamaya ISIS ay uga adkaadaan oo ayna u sii wadaan inay baabi’iyaan haraadiga kooxda ISIS ayna hakiyaan himilooyinkooda adduunka.
Dawladda Islaamiga ah ee Ciraaq iyo Suuriya